အင်တာနက်ပေါ် တွေ.ရှိမှုများအားပြန်လည်ဝေမျှ ပေးထားခြင်းသာဖြစ်သည် ..
02:30 လေ့လာစရာလေးများ No comments
3D စာလုံးလေးတွေ ဖန်တီးချင်တဲ့ သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဝင်ပြီး မိမ်ိတို့ရဲ့ နာမည်လေးတွေကို ကျနော် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဖန်တီးယူလို့ ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ အားနည်းချက် တခုကတော့ မြန်မာလို အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး..။ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်..။
မူရင်းဆိုဒ် - မူလ စာမျက်နှာသို့..
အောက်ကလင့်တွေကလည်း အပေါ်ကနဲ့ ဆိုဒ်တခုထဲပါပဲ..။ 3D စာလုံးတွေကို ဖန်တီးဖို့ အပေါ်က လင့်မှာ လိုက်ရှာစရာ မလိုအောင်လို့ အောက်ကလင့်တွေကနေ အလွယ်ဝင်သွားလို့ ရပါတယ်..။
မူလစာမျက်နှာ မှာတော့ အောက်ကအတိုင်း မြင်ရမှာပါ..။ မိမိတို့ အသုံးပြုလိုတဲ့ စာလုံး ဒီဇိုင်းတွေကို ရှာပြီး တချက်ကလစ်လိုက်ရင် နောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာ စာလုံးတွေ ဖန်တီးဖို့ အဆင်သင့် ဖရိန်တွေ ပေါ်နေပါပြီ..။
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံတွေအတိုင်း မိမိတို့ ဖန်တီးလိုတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို တချက်စီ နှိပ်သွားလိုက်ယုံပါပဲ..။
Text နေရာမှာ နာမည်ရေးပြီး အောက်ကဝိုင်းပြထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ပြုပြင်ပေးလို့ ရပါတယ်..။ ကျနော်ကတော့ ဘာမှ မပြင်ပါဘူး..။ ကျနော့် နာမည်ရေးပြီး သူပေးထားတဲ့ အတိုင်းပဲ လုပ်သွားလိုက်ပါတယ်..။
အပေါ်ပုံမှာ အောက်ဆုံးက အဝိုင်းကတော့ Font ရွေးပေးရင် ရပါပြီ..။ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတာကတော့ မိမိအသုံးပြုမယ့် စာလုံးရဲ့ နောက်ခံ အရောင်ကို ရွေးပေးဖို့ပါ..။ နောက်ခံ အဖြူရောင် မသုံးချင်တဲ့ သူများကတော့ အောက်ကပုံအတိုင်း နောက်ခံအရောင်တွေကို ရွေးယူလို့ ရပါတယ်..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း ပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ Calculate Effect ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် ခဏနေကြာတဲ့အခါ အောက်ကပုံအတိုင်း ကျနော် ရွေးယူထားတဲ့ စာလုံး ဒီဇိုင်းတခု ပေါ်လာပါပြီ..။ အဲ့ဒါကို အောက်ဆုံးမှာ ပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ အတိုင်း Save လိုက်ရင် မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကို ရောက်လာပါပြီ..။
ပုံပေါ်မှာ Right Click >> Save image as ကို နှိပ်လိုက်ပါ..။ အောက်ကပုံအတိုင်း ပုံသိမ်းဖို့ နေရာပေးပြီး Save ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဒီစာလုံး ဒီဇိုင်းပုံလေးကို ရသွားပါပြီ..။ အားလုံးပဲ 3D Text စာလုံးလေးတွေ ဖန်တီးရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ..။
gtalk မှာ offline လုပ်ပြီးချက်နည်း
02:26 gmail/gtalk ဆိုင်ရာများ No comments
အဲဒီမှာ အရင်ဆုံး Signin ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်း Gtalk က Username နဲ့ Password ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် စလို့ ရပါပြီ… သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို Gtalk မှာလိုပဲ တွေ့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် Gtalk နဲ့ တော့ အကုန်မတူဘူးနော်။ သူက တစ်မျိုးလေး… အဲဒီအထဲကို ရောက်ရောက် ချင်း Gtalk အတိုင်းပဲ Online မှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို အပေါ်ဆုံးမှာ တွေ့ရမယ်။ အခု အတိုင်း ဆို သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို Gtalk မှာ Online အနေနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း မြင်ရမယ်…. ပြောချင်တဲ့ သူကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပြောကြည့်ပါ။ပုံမှန် Gtalk အတိုင်းပဲ…. သူကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စကားပြောဖို့ ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်ပုံမှန် Gtalk ကလို Window တစ်ခု အနေနဲ့တော့ ထွက်မလာဘူး။
Tab တစ်ခုအနေနဲ့ Contacts ရဲ့ဘေးမှာ ကိုယ်ပြောမယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ နာမည်နဲ့ ထွက်လာမယ်…ကဲ အခုစပြောတော့မှာက သူငယ် ချင်း တို့ သိချင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို သူများမမြင်အောင်
offline လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေ… အရင်ဆုံး Gtalk မှာ Singout လုပ်ဖို့သွားတဲ့ မြှားလေးကို မှတ်မိတယ်နော်။ အဲဒါက Contacts ရဲ့ အောက်မှာရှိတယ်… အဲဒီံ မြှားကလေး ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ဆုံးနားက invisible ကိုရွေးပေးပါ… ဒါဆိုရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကို မမြင် ရတော့ဘူး။ ကိုယ်က သူတို့ဆီမှာ offline ဖြစ်သွားပြီ… ကိုယ်ကသာ သူတို့ကို မြင်နေရမယ်… ကိုယ်က offline ပုံစံဖြစ်နေပေမယ့် သူတို့ကို စကားသွားပြောလို့ ရတယ်နော်… သူတို့ဆီမှာတော့ ကိုယ်က offline ကြီးနဲ့ စကားတွေပြောနေတာပေါ့…
ကဲ စမ်းသပ် ကြည့်လိုက်ကြပါ…
ကွန်ပျူတာတွေ အတွက် မြန်မာဖောင့် မျိုးစုံ
01:37 ကွန်ပျူတာ အခြေခံကလေးများ No comments
ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို window အသစ်တင်တော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာဖောင့်တွေကို သုံးနိုင်ဖို.အတွက်
လိုအပ်တဲ့မြန်မာဖောင့် တွေကို အလွယ်တကူ ရနိုင်ဖို.ဆိုရင် ဒီဟာလေးကိုသာ ဒေါင်းထားလိုက်ပါ။
မြန်မာဖောင့် မျိုးစုံပါ ပါတယ် ဒေါင်းပြီး ရလာတဲ့ RAR ဖိုင်ကိုဖြေပြီး အထဲမှာ ပါတဲ့ ဖောင့်တွေအကုန်
လုံးကို copy ( Ctrl+A ) လုပ်ပြီး control penal ထဲက fonts ဆိုတဲ့ ထဲမှာ သွားပြီး patse ထည့်ထားလိုက်ရုံနဲ. မြန်မာဖောင့်တွေအကုန်လုံးကိုသုံးနိုင်ပါပြီ။ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်က
Link မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။..............
ဒီနေရာ မှာဒေါင်းပါခင်ဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။..
Android ဖုန်းတွင် patten လော့ကျတာကို ဘာဆော့ဝဲမှ မသုံးဘဲ ပြင်နည်း
00:31 android ဖုန်း No comments
ဒီအဆင့် မှာတော့yes delete all user ဆိုတဲ့ စာကြောင်းရောက်အောင် အသံတိုးတဲ့ ခလုပ်နဲ့ ဆွဲချလိုက်ပါ။ပြီးရင် home button ကိုနိပ်လိုက်ပါ။
ဒီအဆင့် မှာတော့ အပေါ်ဆုံးကစာကြောင်းဖြစ်တဲ့reboot system now ဆိုတဲ့ စာ ကို home button နဲ့ ရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ခဏစောင့် လိုက်ပါ။
အိုကေပြီးရင်စက်ရုပ်ပုံလေးဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့် မယ် အဲဒီစက်ရုပ်ကလေးကိုလက်နဲ့ ထောက်လိုက်ပါ
ပြီးရင်အောက်ကပုံမှာစာတွေအများကြီးအောက်မှာ လေးထောင့် အကွက်လေးပေါ်လာပါလိမ့် မယ် အဲဒီအလယ်ကလေးထောင့် အကွက်လေးကိုနိပ်လိုက်ပါ။
ကဲအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီဗွီဒီယိုလင့် လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်တွေ့ ကြည့် လို့ ရအောင်ပါ။
( ပုသိမ်သားလေး စိုင်းသူ နည်းပညာမျှဝေခြင်း ) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Android ဖုန်းမှ gmail. အကောင့်ဖွင့်နည်း
00:18 android ဖုန်း No comments
ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ Gmail Account ဖွင့်လို့မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မိမိတို့ရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်ကနေတဆင့် Gmail Account အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရပါပြီ။Android ဖုန်းကိုသုံးပါ။Android က google ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် OS ဖြစ်လို့
Credit to : Android လုလင်
Driver Genius Professional Edition ဖြင့် Window Driver များကို back up လုပ်ခြင်း
08:54 ကွန်ပျူတာ အခြေခံကလေးများ No comments
ကျနော် Driver Genius Professional Edition နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Driver Genius Professional Edition ရဲ့ Back up လုပ်နည်းလေးပြောရအောင်။
Back up လုပ်တယ်ဆိုတာ လက်ရှိမိမိသုံးနေတဲ့ ၀င်းဒိုးရဲ့Driverတွေကိုမပျောက်ပျက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့
သဘောပါပဲ။ ဥပမာ...မိမိကွန်ပျူတာဟာ တစ်စုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်လို့ Window ပြန်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီ
ကွန်ပျူတာက DriverCD လဲမရှိ၊ Driver fileလဲ အရန်သင့်ရှိမနေဘူးဆိုရင် ဒီDriver Genius Professional Edition နဲ့ဖြေရှင်းဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ ၀င်းဒိုးမချခင် ဒီဆော့ဝဲလ်ကိုမောင်းပြီး Driver ကို Back up လုပ်ထားရုံ
ပါပဲ။ Backup နဲ့ Restore, Backup နဲ့ Recovery တို့သည် အမြဲယှဉ်တွဲနေပါတယ်။
Driver Genius Professional Edition ရဲ့ compatible ဖြစ်နိုင်သော OS များအောက်အတိုင်းပါပဲ...
Operating System: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/XP x64/Server 2003 x64/Vista x64/Windows 7/Windows7x64/Windows Server 2008/Windows server 2008 x64
Driver Genius Professional Edition ရဲ့ Back up လုပ်နည်း
(၁) ထုံးစံအတိုင်း အင်စတောထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ မခက်ပါဘူး ဆော့ဝဲလ်ရဲ့ညွန်ပြမှုအတိုင်း Next တွေကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
(၂) အင်စတောထည့်သွင်းမှုပြီးတာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း Start Scan နဲ့အတူ Screenshot ပုံတွေ့ရမှာပါ။ Driverကို Scan လုပ်ချင်ရင်တော့ Start Scanကိုနှိပ်။ မလုပ်ချင်ရင် ကြက်ခြေခတ် close ပေးပါ။ Screenshot ရဲ့ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာ Home, Backup, Restore,Update, Uninstall စသည်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၃)မိမိလက်ရှိဝင်းဒိုး Driverရဲ့ Back up လုပ်ချင်ရင် ဘယ်ဖက်မှာ Backup Driver ကိုနှိပ်။ Collecting
Driver Information ဘောက်စ်ပေါလာမှာဖြစ်တယ်။
(၄) နောက်တစ်ဆင့်က Select the Drivers you want to bankup, မိမိ Backup လုပ်ချင်တဲ့ Driver
တွေကို ရွေးဖို့။ အောက်မှာ Currently Used Driver, Original Window Driver, Disconnected
Device Driver သုံးမျိုးလုံးကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ။ အောက်မှာလဲ စုစုပေါင်းရွေးချယ်ထားတဲ့ Driver အရေအတွက်ကိုလဲပြထားပါတယ်။ ပြီးရင် Next ကိုပေး။
(၅)Backup Type and Backup Location, Backup file လုပ်မည့်အမျိုးအစား၊ Backup file သိမ်း
မည့်နေရာရွေးချယ်ဖို့ပါ။ ကျနော်က D:မှာပဲသိမ်းထားလိုက်တယ်။ ၀င်းဒိုးကို ဖေါမက်တစ်ခုလုံးချမယ်ဆိုရင် အခြား Extarnal Hard disk တစ်ခုခုမှာသိမ်းထားစေချင်တယ်။
(၆) ဒီအဆင့်က Backing up your existing Windows Driver Installation, လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့
၀င်းဒိုး Driver တွေကို Backup လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ကဲ...ဒါတော့ Completing the Backup Task, Backup လုပ်ဆောင်တာပြီးသွားပြီ။
ကျနော်က D: Drive မှာထားတယ်ဆိုတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း Driver Backup 12-142010 22945 ဖိုင်တစ်
ဒါကတော့ Driver ကို Backup လုပ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Backup file ကို Restore ပြန်လုပ်နည်း
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Backup လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ကို Restore ပြန်လုပ်ချင်ရင် ကျနော်နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်မယ်။
၀င်းဒိုးအသစ်တင်ထားရင် ဒီဆော့ဝဲလ်ကိုပြန်ထည့်သွင်းပါ။ ပြီးတော့ Restore Drivers ကိုနှိပ်။ အောက်ကပုံကို
(၁) Restore Drivers from Previous Backups
(2) Browse my computer for Drivers Backups နှစ်မျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၁) Restore Drivers from Previous Backups သဘောက မိမိဝင်းဒိုးကို ဖေါမက်မချခင်တုန်းက Backup
file ကို သိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲ (Backup file ကို အခြားတစ်နေရာသို့ မပြောင်းရွေ့ပဲ)Restore ပြန်လုပ်မယ်ဆို
ရင် Restore Drivers from Previous Backups ရွေးရပါမယ်။
(2) Browse my computer for Drivers Backups, ဆိုတာ မိမိ Backup File ကို အခြားတစ်နေရာ
သို့ပြောင်းရွေ့လိုက်မယ်၊ သဘောက D: ကနေ သိမ်းထားတဲ့ Backup File ကို အခြား Drive တစ်ခုကနေပြောင်း
ရွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် Restore ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ Browse my computer for Drivers Backups ကို
...... http://www.driver-soft.com/download.html# ...........
samsung ဖုန်းသုံးသူများအတွက် အသုံးဝင် ကုတ် နံပါတ်များ
09:23 android ဖုန်း No comments
window error တွေဖြစ်ပြီး နှေးနေရင် မြန်အောင်လုပ်နည်း
09:14 ကွန်ပျူတာ အခြေခံကလေးများ No comments
Windows error တွေထဲကအရင်ဆုံး စက်တက်တာ ကြာတဲ့အကြောင်း ကနေစကြ ရအောင်
စက်တက်တာမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ start > run> msconfig ကနေ Boot tab က timeout 30 seconds ကနေ လျော့ပေးလိုက်ပါ ပြီးတော့ Boot screen တက်နေတာမကြိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်ထားချင်ရင်တော့ NoGUI Boot ကိုအမှန်ခြစ်ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင်
Apply > Ok ပေါ့ ဒါဆိုခုဏ ကချိန်ထားပေးတဲ့ Timeout seconds အတွင်းမှာ Boot ကိုရအောင်တက်ပေးလိမ့်မယ်။
အားသာချက်ရှိသလိုဆိုးကျိုးလဲရှိနေပါတယ် Boot time ကိုမြန်မြန်တက်ပေးပေမဲ့ Boot time မှာလုပ်နေကျ Test တွေကိုတော့ကျော်သွားမှာဖြစ်လို့ကြာရင် Files error တွေ Memory test error တွေကြုံလာနိုင်ပါတယ်
ယူလာတဲ့ နေရာတော့မေ့သွားလို. ဆောရီးပါ :)
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ တင်ထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်ဆော့ဝဲ အလုပ် လုပ် မလုပ် သိနိုင်ရန်
မိမိတို့ရဲ့စက်မှာ တင်ထားတဲ့ Antivirus ဟာ Virus တွေကို ကောင်းကောင်းစောင့်ကြည့်ပြီး ဖျက်ဆီးပေးနိုင်ရဲ့လား ဆိုတာစစ်ဆေးမယ့်နည်းလမ်းလေးပါ..ဘယ်လို စစ်ဆေးမလဲဆိုရင် Notepad ( window+R ကိုနှိပ်ပါ notepad ရေးထည့်ပါ)
နဲ့ Bat Files လေးတစ်ခုရေးပါမယ်..အရင်ဆုံး အောက်မှာပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို Notepad ထဲသို့ကူးထည့်
Notepad ထဲသို့ကူးထည့်ပြီးပြီဆိုရင် virustest.bat ဆိုပြီး နာမည်ပေးကာ Desktop ပေါ်သို့ Save လုပ်ပါ
( virustest.bat လို့နာမည်ပေးရမှာနော်.. virustest.txt ဆိုပြီးနာမည်ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး ) .. Save
လုပ်ပြီးလို့ ခဏအတွင်းမှာဘဲ မိမိရဲ့ Antivirus ဟာ Desktop ပေါ်မှာ Save လုပ်ထားတဲ့ virustest.bat ဆိုတဲ့
ဖိုင်ကို Virus Files အဖြစ် သတိပေးပြီး သတ်ပစ်ခိုင်း / သတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်.(သတ်ပစ်တယ်ဆိုတာက save လုပ်မရဘဲပျောက်သွားတာပါ).ဒါဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ Antivirus
ဟာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်..အားလုံးဘဲ ဗဟုသုတ တိုးပွားကြပါစေခင်မျာ... :-)
Software မသုံးပဲ Computer ထဲက ပိုနေသော အမှုိုက်များ ရှင်းနည်း
10:43 ကွန်ပျူတာ အခြေခံကလေးများ No comments
တင်ထားတာလေးများဖတ်ရန် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာအခြေခံ လေးများ mozilla firefox ဆိုင်ရာ Gmail/Gtalk ဆိုင်ရာများ Google ဆိုင်ရာ Facebook ဆိုင်ရာ Android ဖုန်း ထူးဆန်းထွေလာ လေ့လာစရာ စာအုပ်များ အတွေးစာစု ပုံပြင် ၀တ္ထုတို တာရာမင်းဝေ ကဗျာများ သစ္စာနီ ကဗျာများ မောင်ချောနွယ် ကဗျာများ စိုင်းဝင်းမြင့် ကဗျာများ ဘအောင် ကဗျာများ သုတ အဖြာဖြာ တင်မိုး ကဗျာများ ကြိုက်မိတဲ့ ကဗျာ
ကဗျာ၊ရသ စာပေဆိုဒ်များ သစ်ခက်အိမ် နိုင်းနိုင်းစနေ မင်းဝေဟင် လူဗိုလ်ဟူသည် လွန်းထားထား (ဆေးတက္ကသိုလ်) သက်ဝေ သက်တန်.ချို သတိုး သံစဉ်မဲ့အလင်္ကာများ ရွှေစုန်းချောင်းကဗျာများ အဖြူရောင်ရွှေ နွေဦးလေ CONT3MPOETRY Burmese Poetry Foundation ကဗျာဝိညာဉ်၏ လက်တော်များ ခေတ်ကျန်ကဗျာများ အိန္ဒြာ ပန်ဒိုရာ
နည်းပညာဆိုဒ်များ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ ) KP3family နည်းပညာမှတ်စု online ပေါ်ကနည်းပညာများ TRA-MYANMAR ၀င်းကမ္ဘာကျော် နည်းပညာမှတ်တမ်း လုလင်တစ်ဦး စောလင်းနက်စ်
မကြာခဏရောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုဒ်များ စပ်မိစပ်ရာ မှူးသော် မှော်ဝင်မြို. သူရိန်လင်း မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) IT မုတ်ဆိုး နေသာ(နည်းပညာ)
သတင်း နှင့် မီဒီယာဆိုဒ်များ သစ်ထူးလွင် ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ ဧရာဝတီ ELEVEN MEDIA GROUP7day news မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ မြန်မာ့တိုင်း(မ်) မိုးမခသတင်း ပြည်သူ.လွတ်တော် သူရိယသတင်း MRTV-4 ရွှေအမြုတေ RFA လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ မဇ္ဈိမသတင်း WE FIGHT WE WIN ရှိုတ် ဂျာနယ် MYANMAR NEWS HUB
လိုအပ်သမျှ စာအုပ်များရှာရန် ( Ebooks ) စကားဝါမြေ စာကြည့်တိုက် အိပ်မက်လှိုင်း စာအုပ်စင် ၀ိညာဉ်သစ်အွန်လှိုင်းစာကြည့်တိုက် ရွှေစကား Ebooks စာအုပ်များ Burmeseclassic ebooks Myanmarnetwork.com ebooks PDF Search Engine (ebooks) မြန်မာသီချင်းနုတ်စ်များယူရန်
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် The best engnish 4you ဘာသာပြန်ဆိုဒ် English-Myanmar online dictionary Foreign Language Vocabulary, Grammar,
ဓါတ်ပုံပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ photoshop လေ့ကျင့်ခန်းများ photoshop ကိုလေ့လာဖို. GIF ပုံအရှင်များပြုလုပ်ရန်( ၁ ) GIF ပုံအရှင်များပြုလုပ်ရန် ( ၂ ) ဓါတ်ပုံ ဖရိန်ထည့်ရန် ( ၁ ) ဓါတ်ပုံ ဖရိန်ထည့်ရန် ( ၂ ) ဓါတ်ပုံ ဖရိန်ထည့်ရန် ( ၃ ) ဓါတ်ပုံ ဖရိန်ထည့်ရန် ( ၄ ) ဓါတ်ပုံ ဖရိန်ထည့်ရန် ( ၅ ) ဓါတ်ပုံ ဖရိန်ထည့်ရန် ( ၆ ) pizap ဓါတ်ပုံပြင်ရန် photo2text စာလုံးဒီဇိုင်းဓါတ်ပုံ
ဗွီဒီယို နှင့် MP3 များရနိုင်တဲ့ဆိုဒ်များ Myanmarmp3.net မဉ္စူရီ Mp3 သီချင်းများ All Channal for all myanmar Shweo.net movies ပန်းစကား musics myanmar Network 1 channal foreign movies
ဆေးပညာဆိုဒ်များ ဆေးပညာစာများ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဆရာဝန်ဘ၀ စာမျက်နှာ
လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆိုဒ်များ Blog Widgets များ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးများတင်ရန် ဖိုင်များတင်ပြီး ပြန်မျှဝေရန် ဖိုင်များသိမ်းထားနိုင်ရန် သီချင်းတွေဆိုပြီး တင်နိုင်တဲ့နေရာ Wedsite ဖရီးလုပ်လို.ရတဲ့နေရာ ဓါတ်ပုံတွေတင်ပြီး ပြန် share ရန် သီချင်းများကို ဖိုင်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် ဖိုင်များ တင်ရန် share ရန် သီချင်းများပြုလုပ်ရန်
နိုင်ငံတကာ code ကြည့်ရန်
ကိုယ့်ရဲ့ password လုံခြုံမှုကိုစစ်ရန် ၂
နိုင်ငံတကာဖုန်းထဲသို. SMS ပို.ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ password လုံခြုံမှုကိုစစ်ရန် ၁
http://Baaung.blogspot.com အလည်လာသူ မိတ်ဆွေ အားလုံး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ပါစေ..... Powered by Blogger.
Blog Archive December (2) October (3) September (3) May (5) April ( 1 ) March (7) February ( 8 ) January (7) December (9) November ( 8 ) August (3) July (5) June (2) May (3) April (4) March ( 1 ) February (2) January ( 10 ) November (2)
Copyright © Ba aung | Powered by Blogger